Saint Bernadette, Eprel 16: ihe ịmaghị banyere onye nsọ ahụ hụrụ Madonna | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Mina Del Nunzio - Eprel 16, 2021
Ọnwa Nke Anọ 16 Saint Bernadette. Ihe niile anyị maara banyere Apparition na Lourdes ozi o si na Bernadette bia. Naanị ya ahụla ya mere na ọ dabere na akaebe ya. Ọnye na-bụ Bernadette? Oge atọ na ndụ ya nwere ike ịdị iche: afọ ịgbachi nkịtị nke nwata; ndu "oha mmadu" n'oge oge Apparition; ndu "ezoro ezo" dika okpukperechi na Nevers.
Bernadette Soubirous Amụrụ na Lourdes, n'oge ahụ bụ obodo dị na Pyrenees, na 7 Jenụwarị 1844 n'ime ezi na ụlọ nke ndi igwe mil miller, bụ ezigbo ezigbo mmadụ na mbido afọ ndụ Bernadette. Bernadette nwere ahụ isi ike, na-arịa mgbu afọ na, na-arịa ọgbụgbọ ọgbụgbọ na ọnya ọgbụgba, ga-enwe ụkwara ume ọkụ na-adịghị ala ala. Ọ bụ otu n'ime ụmụaka n'oge ahụ, na France, amaghị ka e si agụ ma ọ bụ ede, n'ihi na ha ga-arụ ọrụ. Ọ na-aga akwụkwọ site n'oge ruo n'oge, na klasị ụmụ agbọghọ dara ogbenye nke ụlọ ọgwụ nke Lourdes, nke ndị "Sisters of Charity of Nevers" na-agba. Na Jenụwarị 21, 1858, Bernadette laghachiri na Lourdes: ọ chọrọ ịme ọgbakọ mbụ ya ... Ọ ga-eme ya na June 3, 1858.
Ọ bụ n'oge a ka Apparition na-amalite. N'ime ọrụ ndị mmadụ na-arụ, dị ka ịchọ osisi akọrọ, lee Bernadette na ihe omimi a. A mkpọtụ "dị ka a ikuku nke ifufe", a ìhè, a ọnụnọ. Gịnị bụ mmeghachi omume ya? Gosi ezi uche na nkà ozugbo nke nghọta dị ịrịba ama; na-ekwenye na ọ dị njọ, ọ na-eji ikike mmadụ ya eme ihe: ọ na-ele anya, na-ehichapụ anya ya, na-agba mbọ ịghọta .. Mgbe ahụ, ọ na-echigharịkwuru ndị ibe ya iji chọpụta echiche ya: «you hụla ihe ọ bụla? ".
Saint Bernadette: ọhụụ nke Madonna
Ozugbo o kpekuru Chineke: o kwuru rosary. Ọ na-abanye na Chọọchị ma jụọ Don Pomian maka ndụmọdụ na nkwupụta ya: "Ahụrụ m ihe na-acha ọcha nke nwere ọdịdị nke nwanyị." Mgbe Commissioner Jacomet gbara ya ajụjụ, ọ na-aza obi ike na akọ na-enweghị atụ, akọ na nkwenye siri ike na nwata nwanyị na-agụghị akwụkwọ. Na-ekwu maka Apparition na nkenke, na-agbakwunye ma ọ bụ wepụ ihe ọ bụla. Naanị otu ugboro, ụjọ si na ike nke rev. Peyramale, na-agbakwunye otu okwu: Mister parish priest, Nwanyị ahụ na-arịọ mgbe niile maka ụlọ ụka Bernadette na-aga Grotto, nwanyị ahụ anọghị ya. Na mmechi, Bernadette kwesiri ịzaghachi ndị na-ekiri ya, ndị nwere mmasị, ndị nta akụkọ ma pụta n'ihu kọmitii obodo na nke okpukpe. N'ebe a, ewepụrụ ya ugbu a na efu na atụmatụ ya ga-abụ onye ọha na eze: ezigbo ikuku mmiri ozuzo na-emetụta ya. O were ogologo ntachi obi na ọchị ka ị tachie obi ma chekwaa ịbụ eziokwu nke akaebe ya.
Saint Bernadette: ọ naghị anabata ihe ọ bụla: "Achọrọ m ịnọgide ogbenye". Ọ gaghị azụ ahịa na nrite "Abụghị m onye ahịa," mgbe ha gosiri ya foto ya na eserese ya, ọ na-eti mkpu, sị: "iri sous, nke ahụ bụ ihe m bara uru! Na ọnọdụ a, ọ gaghị ekwe omume ibi na Cachot, Bernadette ga-echedo ya. Onye ụkọchukwu parish ahụ bụ Peyramale na onye isi obodo Lacadé kwekọrịtara: Bernadette ga-anabata ka "onye ọrịa na-arịa ọrịa" n'ụlọ ọgwụ ndị Sista nke Nevers na-elekọta; ọ bịarutere ebe ahụ na July 15, 1860. Mgbe ọ dị afọ 16, ọ malitere ịmụ ịgụ na ide. Onye ka nwere ike ihu, na ụka nke Bartrès, a hụrụ "mkpara" ya. N'ikpeazụ, ọ ga-edegara ezinụlọ ya akwụkwọ ozi na Pope! Ka o bi na Lourdes, ọ na-eletakarị ndị ezinụlọ ahụ ka oge na-aga "ụlọ nna". Ọ na-enyere ụfọdụ ndị ọrịa aka, mana karịa ihe niile ọ na-achọ ụzọ nke ya: ọ dịghị mma na enweghị isi ego, olee otu ọ ga - esi bụrụ onye okpukpe? Na ikpe azu o nwere ike ibanye na ndi Nwanyi Nevers "n'ihi na ha amanyeghi m". Site na oge ahụ ọ nwere echiche doro anya: «Na Lourdes, ozi m gafere». Ugbu a, ọ ghaghị ịkagbu onwe ya iji nwee ohere maka Meri.
Ezigbo ozi nke Nwanyị Nwanyị anyị na Lourdes
Ya onwe ya ji okwu a: "Abịara m ebe a iji zoo." Na Lourdes, ọ bụ Bernadette, onye ọhụ ụzọ. Na Nevers, ọ ghọrọ Nwanne nwanyị Marie Bernarde, onye nsọ. Ọtụtụ mgbe enwere okwu banyere oke nke ndị nọn ahụ n’ebe ọ nọ, mana ekwesiri ighota ya na Bernadette bụ ihe ndabakọ: ọ ga-agbanahụ mmata, chebe ya ma chekwaa Ọgbakọ. Bernadette ga - akọ akụkọ banyere Apparition n’ihu obodo ụmụnne nwanyị a gbakọtara ụbọchị ahụ mgbe ọ bịarutere; mgbe ahụ ọ gaghị ekwu maka ya ọzọ.
Ọnwa Nke Anọ 16 Saint Bernadette. A ga-edobe ya n’ụlọ nne ya ebe ọ na-achọ ike ilekọta ndị ọrịa. N'ụbọchị ọrụ ahụ, a hụghị ọrụ ọ ga-arụ: mgbe ahụ Bishọp ga-ekenye ha "Ọrụ ikpe ekpere". "Na-ekpe ekpere maka ndị mmehie" ka Nwanyị ahụ kwuru, ọ ga-ekwesị ntụkwasị obi nye ozi ahụ: "Ngwá agha m, ị ga-edegara Pope, bụ ekpere na àjà." Ọrịa ndị a na-arịa mgbe niile ga-eme ka ọ bụrụ "ogidi nke onye na-arịa ọrịa" ma mgbe ahụ, enwere nnọkọ na-apụ apụ na parlor: "Ndị Bishọp a dara ogbenye, ha ga-aka mma ịnọ n'ụlọ". Lourdes dị ezigbo anya… ịlaghachi na Grotto agaghị eme eme! Ma kwa ụbọchị, n'ụzọ ime mmụọ, ọ na-aga njem ala nsọ ebe ahụ.
O kwughi banyere ya Lourdes, na-ebi ya. «Must gha ibu onye mbu ibi ndu ozi a», Fr Douce, onye nkwuputa ya. Ma n'ezie, mgbe ọ bụ onye nọọsụ na-enyere aka, ọ na-eji nwayọ abanye n'eziokwu nke ọrịa. Ọ ga - eme ya "ọrụ ya", ịnabata obe niile, maka ndị mmehie, omume nke ịhụnanya zuru oke: "Ka emechara, ha bụ ụmụnna anyị". N'ime abalị na-ehi ụra, na-esonyere ndị mmadụ na-eme n'uwa niile, ọ na-enye onwe ya dịka "a kpọgidere n'obe" n'ọgụ agha nke ọchịchịrị na nke ọkụ, metụtara Meri na ihe omimi nke Mgbapụta, na-elegide anya ndị obe: «ebe a ka m ise ike m». Anwụ a Nevers na Eprel 16, 1879, na 35 afọ. Chọọchị ga-akpọsa ya onye nsọ na Disemba 8, 1933, ọ bụghị maka ihu ọma nke Apparition, mana maka ụzọ o si zaghachi ha.
Ekpere iji rịọ maka amara n'aka Nwanyị Nwanyị Lourdes